Xaaladda magaalada Gaalkacyo oo saaka deggan – Radio Muqdisho
Xaaladda magaalada Gaalkacyo oo saaka deggan
Xaaladda Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa saaka degan kaddib markii maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamullada Galmudug iyo Puntland.
Qaramada Midoobay ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ku dhawaad 70 kun Ruux ay ku barakaceen dagaallada muddada seddexda todobaad qaatay ee ka socday Galbeedka Magaalada Gaalkacyo.
Xaaladda magaaladaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay saaka deggantahay inkastoo ay ishorfadhiyaan ciidamada labada dhinac.
Dhinaca kale waxaa jira dadaallo nabadeed aa ay wadaan odoyaal dhaqamedyada deegaankaasi iyo Masuuliyiin kale, inkastoo la soo sheegayo in ay wali socdaan barakaca Dadka deegaanka oo ka baqaya in mar kale lagu dul dagaalo.
Dagaalkii shalay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ayaa sababay dhimashada iyo dhaawacyo badan oo la dhigay Xarumaha caafimaadka ee magaaladaasi Gaalkacyo.
Dhaawacyada askar ka tirsan ciidamada Qalabka sida oo loo qaaday dalka Sucuudiga+Sawirro
Shir looga hadlayo isbedelka cimilada adduunka oo ka furmay Cape town +Sawirro